Axmad Madoobe oo xoog ku kala diray Shacab soo dhaweyn lahaa Musharax Xil. Xidig – Somali Top News
Axmad Madoobe oo xoog ku kala diray Shacab soo dhaweyn lahaa Musharax Xil. Xidig
Wararka aan ka heleyno Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ay kala eryeen,isla markaana ay jirdil u geysteen Dad Shacab ah iyo Wariyeyaal ka qeyb qaadan lahaa soo dhaweynta Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan Golaha Shacabka kuma wajahnaa Kismaayo.
Dadka Shacabka ah iyo Wariyeyaasha ayaa ku sugnaa banaanka hore ee Garoonka Diyaaradaha Magalada Kismaayo,iyaga oo doonayay inay soo dhaweeyaan Xildhibaanka oo warar aan heley ay sheegayaan in uu halkaasi u tegayay arrimo la xiriira doorashada Jubbaland.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Jubbaland ay dadka Shacabka ah u diideen inay galaan garoonka,waxaana sidoo kale jirta in mas’uuliyiin ka tirsan Jubbaland xataa loo diiday gelida Garoonka oo ay banaanka ka joogan.
Xaalka Magalada Kismaayo ayaa Maanta ka duwan sidii hore,waxaana sababaha Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig uu Kismaayo u tagayo ay tahay lagu sheegay in uu musharax u yahay doorashada la filayo inay Bisha soo socota ee Agoosto ka dhacdo Magalada Kismaayo.
Tallaabadaan ayaa kusoo aadeysa xilli xalay Guddiga amniga dowlad Goboleedka Jubbaland ay soo saareen amaro ka dhan ah musharixiinta kaas oo ay ka mid ahaayeen inaysan sameysan karin ilaalo u gaar ah,isla markaana amnigooda uu damaanad qaadayo Maamulka Jubbaland.
← Laamaha amniga oo la faray ka hortaga amnidarrada Muqdisho
Russia calls India and Pakistan to exercise restraint →
AMISOM oo ka hadashay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka
Puntland oo ceyrisay madaxda hay’adaha World Vision iyo Relief International